TENY GASY 2.O
Volana jona, volan’ny teny malagasy. Antony nokarakaran’ny blaogin’I Voniary ny hetsika “Teny Gasy 2.0” teny amin’ny IKM Antsahavola omaly izany. “Ny teny malagasy any amin’ny aterineto”: io no lohahevitra noraisina tamin’ity andiany voalohany ity.
Tanjona ny hampiroboroboana ny kolontsaina amin’ny alalan’ny fampiasana ny tenim-pirenena.Indrindra ny fanomezan-danja ny teny malagasy any amin’ny sehatra maro hafa, tahaka ny any amin’ny aterineto. Tsy misy izay tsy mikirakira ny aterineto avokoa ny akamaroan’ny malagasy ankehitriny. Noho izany, rariny raha omena sehatra ihany ny fahafantsika mampiasa ny teny malagasy any amin’ny aterineto : toy ny facebook sy ireo tranokala maro samihafa.
Izany indrindra no nokarain’ny Blaogin’ny Voniary ny hetsika « Teny gasy 2.O ». Tao anatin’ny tontolo andro no nanatanterahana ity hetsika ity, ka hita nandritr’izany ny loabariandasy, ny fifaninanana maro samihafa sy ny fizarana loka hoan’izay nandresy, ireo atrikasa maro sy velankevitra manodidina ny lohahevitra noraisina. Nampihaonina sy nampafantarina omaly ihany koa ireo mpisehatra mamelona ny teny malagasy any amin’ny aterineto.
Vata fitahirizana ny kolontsaina sy ny fomba am-panao tokoa ny teny malagasy, no sady harem-pirenen’ny mpiray tanindrazana. Arak’izany, zava-dehibe ny fampidirana ny teny malagasy any amin’ny aterineto, satria fandraisana anjara amin’ny fampandrosoana lovain-jafy izany.
Tiavina ANDRIANJAFITSEHENO – Setra Andrianabo